ओलीको जिकिर– संसद् पुनःस्थापना गरिए प्रधानमन्त्री खोज्दै मैकहाँ आउनुपर्छ’
फाइल तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनःस्थापना भए के हुन्छ भन्ने अदालतलाई थाहा छ नि ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित आफूनिकट राष्ट्रिय युवा संघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले अदालतले अस्थितरतातर्फ जान दिने विश्वास गर्न नसिकने बताए । “अदालतलाई राम्ररी थाहा छ नि पुनःस्थापना भयो भने के हुन्छ ? अदालतलाई राम्ररी थाहा छैन र ? पुनःस्थापना भयो कथमकदाचित भने प्रचण्डजी र माधव नेपालजी हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुहुन्छ । कहिले उत्तरतिर, कहिले दक्षिणतिर हिँड्नुहुन्छ,’’ उनले भने ।
ओलीले प्रचण्ड–नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने एक प्रतिशत पनि सम्भावना नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री खोज्दै प्रचण्ड–नेपाल आफैँकहाँ आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘‘उहाँहरुको कुनै चान्स छ ? कुनै सम्भावाना छ प्रधानमन्त्री हुने ? विलकुल छैन । एक प्रतिशत मात्रै होइन कि एक प्रतिशतभन्दा पनि तलतल । लडाइँ जित्नु भो भने उहाँहरुले प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्नुपर्ने हो । खोज्दै हिँडेर अन्त्यमा मैकहाँ आइपुग्नुपर्छ,’’ उनले भने ।
ओलीले संसदीय अभ्यासमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चलाउने वातावरण नभए संसद् विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे । उनले सूर्य चिह्नमा प्रचण्ड नलडेकोले उनले सूर्य चिह्न नपाउने दाबी गरे । अब देश ठिक बाटोमा जाने र लोकतन्त्रलाई तल–माथि पर्न नदिने उनले बताए ।
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन आगामी वैशाख ३ गते आह्वान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख गोविन्दप्रसाद... १२ घण्टा पहिले
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आगामी वैशाख ५ गते बस्ने भएको छ । आजका लागि निर्धारित बैठक पार्टीका वरिष्ठ... १२ घण्टा पहिले
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएकाले राजीनामा नदिने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई... १३ घण्टा पहिले